2 askari oo ku dhaawacantay gaari uu jiirsiiyay nin cabsan – The Voice of Northeastern Kenya
2 askari oo ku dhaawacantay gaari uu jiirsiiyay nin cabsan
starfmke August 7, 2016
2 askari oo ka tirsan ciidamada booliska ayaa habeenimadii xalay dhaawacmay kadib markii uu jiiray gaari xawaare dheereeya ku socday oo sida la sheegay uu kaxeynayay nin maandooriye soo isticmaalay xiligaas.
Shilkaan ayaa ka dhacay bar koontarool oo ay ciidamada amaanka ku leeyihiin isgoysyada dhinaca bari ee magaalada tan Nairobi.
Mid ka mid ah labada askari ayaa la dhigay isbitaalka, halka midka kalena la daaweeyay oo laga soo saaray xarunta caafimaadka ee la geeyay.
Darawalka gaariga askarta jiiray ayaa markiiba xabsiga loo taxaabay, waxaana la filayaa in uu maalinta isniinta ee barito kasoo hor muuqdo maxkamadda.
Dhanka kale, 2 ruux oo uu ku jiro askari ka tirsan booliska ilaalada wadooyinka ee loo yaqaanno Traffic-kada ayaa ku dhimatay shil gaari oo galinkii hore ee shalay ka dhacay wadada isku xirta magaalooyinka Eldoret iyo Webuye ee maamul goboleedka Kakamega.
Shilkaas qasaaraha sababay ayaa lagu soo waramay in ay ku lug lahaayeen 2 gaari oo waaweyn oo ah kuwa xamuulka ee qaada shidaalka.
Marka laga soot ago askariga, qofka 2-aad ee ku dhintay halkaas ayaa ahaa caawiyaha mid ka mid ah darawaliinta labada gaari ee isku dhacday.
Taliyaha ciidamada taraaffic-kada ee gobolka galbeedka Geoffrey Njogu ayaa sheegay in 2 gaari mid ka mid ah uu koontaroolka lumiyay kadib markii uu fariinka u go’ay, isagoo markaasna ku dhacay gaariga kale ooh or socday.
Dawaralka gaarigaasi ayaa dhaawac soo gaaray haatan looga daweynayaa isbitaalka degmada Webuye ee ka tirsan maamul goboleedka Bungoma.
← Siyaasiyiinta Jubilee oo shacabka Nakuru uga digay in siyaasadda lagu khaldo
Shacabka oo looga digay in ay kireystaan gawaarida Schoollada →